Mogadishu Journal » Madaxweyne Farmaajo iyo Uhur Kenyatta oo isla soo qaaday arinta muranka Badda ee labada dal
Mjurnal :-Madaxweynaha Masar C/fataax Al-Sisi ayaa heshiis ka dhex dhaliyay Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo kulankan iyo is afgaradka ay gaareen.
Ajandaha kulanka saddex geesoodka ee uu soo qaban qaabiyay Madaxweynaha Masar ayaa waxaa ku jiray arrinta Kiiska Badda ee dacwadeeda taal Maxkamadda ICJ, waxaana ajandahaas in lagu soo daro kulanka uu dhalinayaa shaki kala duwan oo saameyn karta hannaanka ay u socoto dacwada taal Maxkamadda ICJ.
Sidoo kale waxaa muuqata inuu meesha ka baxay oo uu buray go’aankii Soomaaliya ee ahaa in kulanka kasta ee dhex mara Kenya laga saaro ajandaha Kiiska Badda, laguna koobo xiriirka labada dal oo kaliya
Waxaa kaloo meesha ka baxay go’aankii ahaa arrinta badda loogama hadli karo meel ka baxsan maxkamadda ICJ oo xalay ayaa laga hadlay, dib ayaana loo balamay in guddi loo saaro is afgaradkii madaxda labada dal.
Waxaa dib loo dhigi doonaa dhageysiga dacwada ee lagu balansan yahay November 4, 2019 si wada hadalka fursad loo siiyo, Kenya ayaa weli wada isku day kale oo ah in mar kale dacwada ICJ dib loo dhigo, si wada hadalka loo sii wado.
Inkastoo qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Villa Soomaaliya lagu sheegay in kulanka looga hadlay in Kiiska Badda go’aankiisa loo daayo Madaxda labada dal, hadana waxaa lafteeda culeys yeelan kara in kulankaba looga hadlo arrin ku saabsan Badda, taasoo u gogol xaari karta galaan-galkii Kenya waday, isla markaana Midowga Afrika uu gadaal ka riixayay ee ahaa in qaab wada hadal loo galo arrinta Badda.